Spotify mabasa ekuderedza zvinovhiringidza ari kuuya | IPhone nhau
Spotify angave achigadzirira akakosha mashandiro ekudzivirira zvinokanganisa vatyairi
Yekufambisa masevhisi vakaita semasocial network: kune mikana yakawanda uye isu takasarudza iyo inonyatsoenderana nenzira yatinoshandisa zvishandiso. Musiyano uripo pakuti mune kutenderera masevhisi iwe unofanirwa kubhadhara kuva nemabasa akasarudzika.
Spotify ndiro basa rinotinetsa nhasi. Mushandisi weReddit awana mamwe akavanzika mabasa ayo Spotify angave achiyedza akazvitsaurira dzivisa zvinotsausa kune vatyairi. Mune ino kesi panenge paine matatu mabhatani: imwe yekuenda kumberi, imwe kumashure, uye bhatani riri pakati rine maikorofoni chiratidzo chinogona Spotify mubatsiri.
Kudzivisa zvinokanganisa ndicho chinhu chitsva nezveSpotify, kana zvirinani ndizvo zvavanoratidza
Mwedzi mishoma yapfuura, iyezvino CEO weSpotify akazivisa kuti isu tichaedza zvigadzirwa zvitsva mune ramangwana asi panguva ino vanga vasiri kuzozvigovana neruzhinji. Izvi zvinoreva kuti vangave vachiita yakawanda yekutsvagisa nekusimudzira basa mumahofisi avo kuitira kuti vape mushandisi maficha akasarudzika.
Mune ino kesi, mushandisi awana dhizaini mune yazvino vhezheni yekushandisa iyo isingawanzoonekwa nguva dzose. Mavari tinogona kufamba takatwasuka kuti tishandure runyorwa uye nekumira kuti tishandure maforodha: achangopfuura, anodikanwa, nezvimwe. Uye zvakare, kune matatu mabhatani pazasi ayo anotendera iwe kufambisa kana kunonoka nziyo uye imwe ine chekuita ne kududzirwa kwezwi kana zvinoita Spotify mubatsiri.
Aya mashandiro aibvumidza mushandisi wekutyaira kuti arege kuisa maoko pachinhu kwenguva yakareba, saka kubatsirwa kumwe chete kwaizowanikwa pasina kana kubata chidzitiro. Aya mabasa inofanira kunge iri mune zvese zvinoshandiswa kunzvenga zvinokanganisa kuseri kwegumbo izvo zvinogona kukonzera tsaona dzakakomba mumugwagwa.
Mufananidzo - Engadget
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Spotify angave achigadzirira akakosha mashandiro ekudzivirira zvinokanganisa vatyairi
Iyo iPhone isina waya yekuchaja base haizosanganisirwe mupakeji
Apple inotumira mota dzayo kuSpain kunatsiridza Mepu